Nidaam cusub oo loogu talagalay Wadooyinka Baaskiilada | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraNidaam cusub oo loogu talagalay Wadooyinka Baaskiilka
12 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
sharciyo cusub oo loogu talagalay wadooyinka baaskiilka
gaadiidka hadda Turkey ee baaskiilka oo dhan gobolladiisa, Waddooyinkiisa baaskiil in loo isticmaalo ujeeddooyin sida si ay u bixiyaan navigation iyo qorshaynta ee ciyaaraha iyo saldhigyada la dhigto baaskiilka, mabaadi'da iyo nidaamka la xidhiidha qorshaynta mashruuca iyo dhismaha ayaa lagu daabacay in faafinta rasmiga ah mar kale ka go'an.
Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka 'Sharciga Gawaarida Wadooyinka Baaskiilka' ayaa la dhaqangaliyay iyadoo lagu daabacay Rasmiga rasmiga ah. Qorshayaasha soonka cusub ee aagaga aan qorshaysan ee qaanuunka jidadka baaskiil ee loo haystay iyo saldhigyada baarkinada baaskiilka ayaa loo baahnaa in lagu daro. Jidadka baaskiilka ee dhaqan galay xilli cusub iyo adeegsiga baaskiiladaha iyadoo gaadiidleyda gaadiidku si rasmi ah loo furay.
Ka socota Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka:
JADWALKA SIYAASADA EE BICYCLE
Hadaf, Xadka, Basis iyo Qeexitaannada
Ujeedada iyo baaxadda
QODOBKA 1 - (1) Ujeeddada xeerkani waa in la go’aamiyo habraacyada iyo mabaadi’da la xiriira qorshaynta, naqshadeynta iyo dhismaha jidadka baaskiillada iyo rugaha baarkinnada baaskiillada si loo hubiyo in baaskiillada loo isticmaali karo gaadiid, safar iyo ujeeddooyin isboorti.
(2) Xeerkani wuxuu daboolayaa noocyada kala duwan ee wadiiqooyinka baaskiilka ee loo dhisi doono; Heerkani wuxuu daboolayaa mabaadi'da is-dhexgalka midba midka kale, waddooyinka, meelaha dadku lugeynayaan iyo nidaamyada gaadiidka. Meelaha lagu ilaaliyo sharciyada gaarka ah, qorshaynta iyo hirgalinta waxaa lagu fulin doonaa iyada oo la raacayo qaanuunka ay quseyso, haddii aysan jirin qodobo ka hor imanaya qawaaniinta ku saleysan shuruucda gaarka ah, qodobada Xeerkan ayaa lagu dabaqi doonaa.
QODOBKA 2 - (1) Xeer-hoosaadkani wuxuu ku saleysan yahay Qodobka 10-aad ee wareegtada Madaxweynaha ee ku saabsan Ururka Agaasinka Madaxtooyada ee lambarka 7aad ee lagu soo daabacay Rasmiga Gazette ee ku taariikhaysan 2018/30474/1 oo lagu tiriyey 97 iyo qodobka dheeriga ah ee 3aad ee Sharciga Horumarinta lambar 5 ee ku taariikhaysan 1985/3194/6. Waxaa la diyaariyey.
QODOBKA 3 - (1) Xeerarkan;
a) Wadada baaskiil go'doonsan: Wadada baaskiilku ka go'do waddooyinka baabuurtu u maro caqabado jidheed,
t) Wasaaradda: Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka
c) Baaskiilad: Baabuur dhaqaaqa ku dhaqaaqda oo ku rogaya badeecada ama gacantiisa gacantiisa leh awooda muruqyada qofka dul saaran, (Awooda ugu badan ee joogtada ah ee lagu qiimeeyay kama badnaan karto 0,25 kilowatts, xawaaraha wuxuu gaarayaa ugu badnaan 25 km / saacaddii ama isla markiiba ka dib joojinta socodka) Baaskiil koronto ayaa markaa lagu soo daray fasalkan.)
bridge) Buundada Baaskiilka: Buundo bixinaysa iskuxirka iyo sii wadida wadooyinka baaskiilka oo ay ku jiraan isgoysyada, si looga gudbo caqabad dabiici ah ama dabiici ah oo ku socota wadada baaskiilka iyadoo la raacayo raacitaanka baaskiilka,
d) Wadada baaskiilka: Baaskiilada waxaa loo adeegsan karaa iyada oo aan la carqaladeynin isgoysyada dadka lugeynaya, wadada weyn, isgoysyada iyo isgoysyada heerka, laga soo galo iyo bixitaanka waa mamnuuc marka laga reebo meelaha qaar, marka laga reebo ambulance, waaxda dab damiska, amniga iyo gawaarida gendarmerie marka laga reebo meelaha qaarkood, oo u xiran dadka lugeynaya iyo socodka baabuurta. ugu yaraan labo haad jiho kasta.
e) Saldhigga Baaskiillada: Meesha loogu talagalay in baaskiiladaha loogu tago dadweynaha iyo baarkinka aaminka ah ama agagaarka shabakadda gaadiidka ama meesha baarkinku ku yaallo ee ay ku shaqeysan karaan baaskiillo iyada oo ay mas'uul ka tahay maamullada ay khusayso,
f) Wadada Baaskiilka: Wadada baaskiilka ee la dhisi karo iyada oo aan laga tagin masaafada amniga ee qaanuunkan marka laga reebo taraafikada gawaarida meelaha cagaaran sida jardiinada qaran, jardiinooyinka iyo meelaha lagu madadaasho oo loo xiray taraafikada gawaarida,
g) Wadada Baaskiilka: Waddo ama waddo baaskiil oo loo sameeyay ujeeddooyinka calaamadaha dhulka ee meelaha miyiga ah ee aan lahayn aag-wareegto ka baxsan dejinta,
ne) Layunka baaskiilka: Wadada baaskiilka ee sida gaarka ah loogu talagalay baaskiil waddo waddo ah oo u kala soocaya calaamadeynta goobta,
h) Wadada Baaskiilka: Wadada loo qoondeeyay raacista baaskiilka oo noocyadeeda lagu sharxay qaybta saddexaad ee Xeerkan, marka laga reebo dariiqa weyn iyo meelaha lugeeya iyo isgoysyada;
project) Mashruuca wadada baaskiilka: Waxaa diyaariyey naqshadeeye, nashqadeeyaha muuqaalka dhulka, sahamiyaha, qorsheeyaha magaalada ama injineer madaniga ah waxaana ogolaaday maamulka ay quseyso hirgelinta; iyo tirada isgoysyada jidadka iyo qodista qodista wadada halbeegga 1/100, 1/200 ama 1/500 iyadoo loo eegayo noocyada wadooyinka baaskiilka iyo cabirka 1/50 iyadoo loo eegayo qawaaniinta iyo heerarka lagu qeexay Xeerkan. Mashruuca halkaasoo 1/100 lagu cabbiro qeybaha dhaadheer iyo haddii loo baahdo, faahfaahinta cabirka 1/20, haddii loo baahdo,
i) Jid-dhaadheer dhaadheer: Jid-gooyada la siiyay wadada dhinaceeda marta wadada dhinaceeda,
j) Jidka joogsiga: Xariiqda xariiqda laga gooyo ee wadooyinka baabuurta ee joogsadeen calaamadda taraafikada iftiinka ah ama aan nalka lahayn waxay joogsan doontaa oo way sugi doontaa,
k) Jid isbadal ah: Jidadka la siinayo labada dhinac ama hal dhinac dhinac bidix goosgooska wadada taagan,
l) Xuquuqda dariiqa: Xuquuqda mudnaanta ee dadka lugaynaya iyo adeegsadayaasha inay u isticmaalaan dariiqa kuwa lugaynaya iyo isticmaaleyaasha kale,
m) Maamulka la xiriira: Dowlada Hoose ee Magaalada, oo ah dhismaha, dayactirka iyo dayactirka degmada waa masuuliyada degmada magaaloyinka gobolada sharciga ay ku qorantahay Xeerka Dawlada Hoose ee Magaalaga No. 10 ee ku taariikhaysan 7/2004/5216; degmada ay khusayso ee xudduudka u ah degmooyinka iyo aagagga la isku halayn karo ee gobollada kale;
n) Calaamadeynta: Aaladda bixiya wareejinta tilmaamaha gaarka ah, macluumaadka ama digniinta iyadoo la adeegsanayo xariiqyo, qaabab, astaamo, qoraallo, muuqaallo iyo waxyaabo lamid ah midabbo gaar ah oo lagu qeexay waxyaabaha waddada sida xadka, jasiiradda, goosgoos, ilaalin gaari,
o) Calaamadaha: Khadadka, fallaadhaha, qoraallada, lambarada iyo qaababka laga soo sawiray qaybaha waddada sida marinnada wadada, soohdinta, jasiiradda, dhex-dhexaadka, waardiyaha,
ö) Goobaha Gawaarida: Aagga laba ama in kabadan wadooyinka taraafikada ee ka imanaya jihooyinka kaladuwan ay ku kulmaan, iskaga baxaan ama is dhex galaan,
p) Kooxda Baaskiilka Miyiga: Wadada baaskiilka ee lagu dhisi karo meelaha aysan ka jirin qorshaha aagag fulinta ee u dhexeeya degsiimooyinka,
r) Wadada baaskiilka la wadaago: Wadada baaskiilka lagu go'aamiyo sumadeynta lagu sameeyay wadada dusha taas oo ay wada isticmaali karaan gawaarida iyo baaskiilleyda heerka wadooyinka gaariga,
s) Gawaarida nidaamka tareenka: Wadada, nidaamka tareenka fudud, dhulka hoostiisa iyo gawaarida tareenka,
Refuge) Qaxooti: Qaab dhismeed ama qalab taraaf oo kala gooya wadooyinka ama qeybaha wadooyinka midba midka kale, ka hortagaysa iyo nidaaminaya marinka baabuurta hal dhinac ilaa dhinaca kale,
t) Wadada Gawaarida: Qeybta wadada loogu talagalay taraafikada baabuurta,
u) Calaamadda taraafikada: Qalabka taraafikada waxaa lagu dhejiyaa taageero go'an ama la qaadi karo iyo bixinta ogeysiinta tilmaamaha gaarka ah ee leh astaanta, midabka iyo dusha sare,
) TS 7249: Jaangooyooyinka Qiimaynta iyo Naqshadaynta Wadooyinka Magaalada waxaa daabacay Machadka Istaadhaanka Turkiga,
v) TS 9826: Jaangooyooyinka Jidadka Wadooyinka-Baaskiilka ee caanka ah oo ay daabacday Machadka Istaandarada Turkiga,
y) TS 10839: Jaangooyooyinka Qawaaniinta Naqshadeynta Wadooyinka-Waddooyinka ee ay daabaceen Machadka Istaadhaanka ee Turkiga,
z) TS 11782: Jaangooyooyinka Waddooyinka Magaalooyinka iyo Xarumaha Gawaarida Gawaarida Bajaajta oo ay daabaceen Machadka Halbeega Turkiga,
aa) Wadad lugeyneed oo u dhexeysa isbarbar dhigyada khaaska ah iyo kuwa dadweynaha iyo wadada gawaarida ee loogu talagalay dadka lugeynaya iyo ka goynta wadada gawaarida dhagxaanta ee aysan isticmaalin gawaarida,
bb) Band cagaaran: waxaa loola jeedaa aaggaga loo adeegsan karo labadaba muuqaalka dhirta iyo sida gooni u goosad, kuwaas oo loogu talagalay inaysan saameyn ku laheyn wadista baaskiil wadista.
Mabaadi'da guud ee Wadooyinka Baaskiilka
QODOBKA 4 - (1) Wadooyinka baaskiilku waa in loo qorsheeyaa sidii shabakad guud oo isku dhafan oo la socota dariiqyada kale ee gaadiidka ee isku xira degsiimooyinka, goobaha gaadiidka, xarumaha isboortiga iyo aagaga adeegga bulshada iyo kuwa gaarka loo adeegsado si loogu daboolo gaadiidku si badbaado leh u baahan.
(2) Wadada ugu haboon ee baaskiil wadista topografi-ka ayaa la door bidaa marka la qorsheynayo wadiiqooyinka baaskiilka. Shabakada Wadada Baaskiilka; isgoysyada, baloogyada soodhadhka iyo walxaha muuqaalka ah ayaa loo qaybin doonaa ugu yaraan iyo sii wadida wadada waxaa loo qorsheyn doonaa qaab ay baaskiilku ku safri karo meesha laga bilaabo ilaa meesha la tagaayo iyada oo aan la carqaladeyn. Wadooyinka baaskiilka looma qorsheyn karo inay ka gudbaan tunelada loogu talagalay waddooyinka baabuurta.
(3) Shabakada baaskiil wadista waxaa loo qorsheeyay si ay wadayaasha baaskiillada si cad ugu arki karaan gawaarida iyo dadka lugeynaya marka ay ka gudbayaan wadooyinka baabuurta isla markaana tixgalinaya mudnaanta koowaad ee xaq u lahaanshaha marinka lagu sheegay Sharciga Wadada Wadada Lambar 13 ee 10/1983/2918.
(4) Khadadka Baaskiilka iyo saldhigyada gawaarida la dhigto waa in lagu muujiyaa qorshaha qeybinta kaydinta ee loo diyaariyey iyada oo la raacayo Xeerka Dhismaha Qorshooyinka Naafada oo lagu daabacay Rasmiga Gazette ee taariikhdu tahay 14/6/2014 laguna tirin 29030 iyo qorshaha mashiinka gaadiidka iyo mashruuca naqshadaynta magaalooyinka, haddii ay jiraan. Saldhigyada gawaarida ee Baaskiillada waxaa loo qorsheeyay inay la xiriiraan shabakadaha wadooyinka baaskiillada iyo inay buuxiyaan baahiyaha.
(5) Meelaha aan qorshaynayn, waa ku qasab in lagu daro dariiqyada bushkuleetiga loo haysto iyo saldhigyada baarkinada baaskiilka qorshayaasha cusub ee horumarinta. Meelaha aanu lahayn qorshe sooneynti, aagagga baaskiilka iyo wadooyinka baaskiilka lagu qeexay Xeerkan ayaa la sameyn karaa. Meelaha leh qorshaha meelaynta; Wadooyinka baaskiilka lama abuuri karo iyadoon la bedelin qorshaha meelaynta, marka laga reebo wadiiqooyinka baaskiil wadaagga, wadiiqooyinka baaskiilka iyo wadooyinka baaskiilka. Waddooyinka baaskiilka loo kala sooco, jidadka waaweyn ee baaskiilka, buundooyinka baaskiilka iyo tunelada waa in lagu keydiyaa qorshaha aagagga. Dib-u-eegista qorshaha aag-wareega ayaa waxaa ka mid ah wadooyin loo habeeyay baaskiiladaha iyo rugaha baarkinnada baaskiilka iyadoo la raacayo qodobbada Xeerkan.
(6) In kasta oo ay lagama maarmaan tahay in la dhiso waddo baaskiil lagu keydiyo magaalada; nooca wadada baaskiilka ee lagu dabaqi doono adoo tixgalinaya cufnaanta taraafikada, xaaladaha jidheed iyo astaamaha la midka ah ee gobolka halkaas oo laga dhisi doono wadada baaskiilka. Haddii qorshaha xaddidida dalabka uu sheegto nooca wadooyinka baaskiilka ee lagu dabaqi karo Sharcigan, waa ku qasab in la dejiyo oo loo hirgaliyo si ku habboon.
(7) Qorshayaasha horumarineed, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro dariiqa baaskiilka ee u dhexeeya wadada iyo lug-mareenka. Waddooyinka baaskiillada waxaa loo qorsheeyey isla jihada ama u amba-baxa waddada baabuurta ee dhinaca midig ee waddada baabuurta. Wadooyinka baaskiilka bidaarta leh, qorshaynta iyo mashruuc ayaa loo sameeyaa si jihada baaskiilku u leexdo dhinaca lugku u la mid noqoto jihada wadada.
(8) Ballaca ugu yar ee wadada baaskiilka iyo ballaca dariiqa baaskiilka ee qorshayaasha soonaha ayaa lagu tilmaami doonaa wadiiqooyinka kaladuwan ee kaladuwan, jidadka waaweyn ee baaskiilka, buundooyinka baaskiillada iyo tunelada, iyadoo la bixinayo in masaafada ugu yar ee dariiqa baaskiilka iyo masaafada amniga aan lagu darin Sharcigan. Haddii nooca wadada baaskiilka ama tirada haadka lagu cayimay qorshaha soonaha, waxaa la fuliyaa mashruuc iyo hirgelin si ku habboon.
(9) Xaaladaha aan ku jirin qodobkan ee xeerkan, waa mas'uuliyadda maamulka ay qusayso inay horumariyaan xalal kaladuwan iyagoo qaadanaya go'aanka guddiga taraafikada gobolka iyo go'aanka guddiga taraafikada ee magaalooyinka kale, waa haddii agaasinka booliiska gobolku uusan khatar gelin nabadgelyada wadada.
(10) Mashruuca wadada baaskiilku waxaa diyaariya maamulka ay khusayso waxaana la fuliyaa ka dib go'aanka gaadiidka iyo isuduwidda ee degmooyinka magaalooyinka iyo go'aanka guddiga taraafikada ee meelaha kale.
(11) Waa ku qasab in loo diyaariyo mashruucyada haadka baaskiilka, wadiiqooyinka baaskiillada oo kala go'an, jidadka baaskiilka, koofiyadaha baaskiillada, jidadka waaweyn ee baaskiilka, buundooyinka baaskiilka iyo tunelada.
(12) Mashaariicda, agagaarka dariiqa baaskiilka, wadada lugaynta, wadooyinka, isgoysyada, calaamadaha dhulka iyo khadadka iyo kala sooca. Xaashiyaha mashruuca wadista baaskiilku waxa kale oo ay muujinayaan meelaha dhulka hooseeya iyo wiishyada jira, barmaamijyada bartilmaameedyada iyo dhererka jidadka baaskiilka iyo isugeyn dhererkeedu yahay 100 mitir.
(13) Mashaariicda wadiiqooyinka baaskiilka ee aan ka aheyn haadka baaskiilka, qeybta isgoyska ee wadada baaskiilka oo ay kujirto jaranjarada dabiiciga ah iyo kala goynta iyo buuxinta in laga sameeyo dhulka waxaa lagu dari doonaa ugu badnaan 250 mitir. Qeybaha isugeynta waxaa lagu sawiray cabbir ah 1/50. Intaa waxaa u dheer, 500 mitir kasta, cabir 1/20, qaybaha isgoysyada oo faahfaahsan oo muujinaya jidka gaariga, wadada baaskiilka iyo masaafada wadooyinka baabuurta la dhigto iyo cabbir goos goos ah ayaa lagu soo daray. Haddii qoraaga mashruuca ama maamulka u maleeyo inuu lagama maarmaan yahay, tirada qaybaha isugeynta ayaa la kordhiyaa. Mashruuca, si loo go'aamiyo xaddiga qulqulka wadooyinka, qaybaha mudada dheer ee 1/100 ayaa la istcimaalaa markii loo baahdo.
(14) Waa muhiim in dariiqa baaskiilku isku heer yihiin ama inta udhaxeysa dusha sare ee wadada ama lugta lagu gooyo. Wadooyinka bushkuleetiga, marka laga reebo buundooyinka baaskiilka iyo buundooyinka baaskiilka, laguma dhisi karo heerka sare ee lugeyntu. Wadooyinka baaskiilku lama dhisi karo heerka gaadhiga, marka laga reebo marinka baaskiilka iyo masaafada u fog ee looga baahan yahay soo gelidda iyo bixidda. Marka la bixiyo in uusan ka hor imaanayn qodobbada ku xusan faqraddan, qorshaha meelaynta meelaynta ayaa qeexi kara heerka loo maro jidka baaskiilka.
(15) Masaafada ugu yar ee amaanka wadada gaariga, waxay kuxirantahay jihada wadada la wadaago, wadada baaskiilka iyo wadooyinka baaskiilka kaladuwan iyo xawaaraha wadada iyo wadada baaskiilka, waa in lagu dabaqaa sida lagu sheegay Jadwalka 3-aad ee lifaaqa-1.
(16) Qeybaha jidadka baaskiilka ee iskuxiraya isgoysyada isgoysyada wadada gawaarida waxaa lagu rinjiyeeyay rinji buluug ah oo waara oo aan furneyn oo qeybahaan 50 * 50 cm laynka cad waxaa loo isticmaalaa dhinaca midig iyo bidix ee wadada baaskiilka. Muhiim maahan in la rinjiyeeyo wadiiqooyinka baaskiilka ee qaybaha kale. Si kastaba ha noqotee, rinjiga buluuga ah ayaa loo isticmaalaa halka maamulka ay quseyso uu saadaalinayo inuu rinjiyo jidka baaskiil.
(17) Calaamadaha taraafikada, calaamadaha iyo nidaamyada calaamadaynta waa in lagu dhisaa shabakadaha wadooyinka baaskiillada iyadoo la raacayo nidaamyada gaadiidka ee magaalada guud ahaan iyo in la hubiyo nabadgelyada.
(18) Dhismaha, dayactirka iyo hagaajinta shabakadaha wadooyinka baaskiilka iyo rugaha baarkinka gawaarida waxaa saaran mas'uuliyada maamulka ay quseyso.
(19) Ma jiri doonto wax carqalad ah oo loo adeegsado isticmaalka wadooyinka baaskiilka mana jiraan wax carqalad ah oo lagu saari karo ugu yaraan 3 mitir oo dhulka ah. Sidoo kale, tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waxaa qaadaya maamulka ay qusayso ee laamaha geedaha ee ku qulqulaya waddooyinka baaskiilka. Haddii dariiqyada baaskiilku u xiran yihiin ujeeddooyin dayactir iyo hagaajin awgeed, miis digniin ayaa la dhigayaa ugu yaraan 20 mitir hortiisa meesha shaqadan lagu qaban doono iyo jihada kale. Waa mas'uuliyada maamulka ay khuseyso inay sameyaan tubooyinka lugeeya ama dariiqyada dariiqyada baaskiilka si looga ilaaliyo dabaysha, barafka, roobka iyo xaaladaha cimilada la midka ah ee adkeynaya baaskiil wadista.
(20) Wadooyinka Baaskiilka ma isticmaali karaan gawaarida mooyee marka laga reebo kiisas laxiriira laga sameeyo wadada weyn, sida baarkinka, garaashka iyo galida goobta oo loo isticmaalo waqti gaaban, maamulka ay quseyso waa inay kujiraan calaamadaha laxiriira wadada dhinaceeda.
(21) Baanooyin iyo boodhadh xayeysiin ah iyo digniino lama huraan ah ayaa laga soo saari doonaa meelaha loo arko inay ku habboon yihiin maamulka ay quseyso si loo hubiyo in jidadka baaskiilku ay isticmaalaan wadayaasha baaskiillada iyo kor u qaadista wacyiga darawalada baabuurta.
(22) Marka laga reebo wadiiqooyinka baaskiilka, asphalt ama sheyga la taaban karo waxaa loo isticmaalaa lakabka sare ee wadiiqooyinka kale ee baaskiilka waxayna u tahay ikhtiyaarka maamulka inuu isticmaalo agabyo la mid ah oo ay bixinayaan si ay u siiyaan meel badbaado leh oo waditaan ah.
(23) Wadooyinka baaskiilka waxaa loo qorsheyn karaa si loogu xiro dhismeyaasha jiifka iyo dhismayaasha waxbarashada midba midka kale iyo, haddii ay jiraan, jidadka baaskiil-ka-baxsan ee jaamacadaha.
(24) Gaadiidka iyo iskuxirka xarunta magaalooyinka waaweyn ee loogu talagalay isticmaalka ugu yaraan laba-lugo taayir leh (oo leh gacan ama koronto goys, koronto koronto iyo wixii lamid ah) iyo baabuurta naafada ku shaqeeya ee batroolka leh awoodda ugu badan ee lagu qiimeeyo 0,25 kilowatts, oo ay ku jiraan kuwa loogu tala galay dadka lugeynaya ee leh wadiiqooyinka baaskiilka Go'aanka guddiga taraafikada gobolka ee meelaha kale waxaa ogolaanaya maamulka ay quseyso. Wax go'aan ah looma qaadan karo isticmaalka baaskiil wadista wadooyinka waaweyn.
(25) Waxaa lasiiyay in ra'yiga togan ee hay'adda ay khusayso laga helo xarumaha dowliga ah ee ay dowladdu leedahay, aagagga lagu tababarto maareynta baaskiillada waxaa dhisi kara maamulku haddii aysan bixin goobaha ciyaaraha gudaha iyo bannaanka ee qorshayaasha aagagga, iyo meelaha loogu talagalay jardiinooyinka ama meelaha lagu madadaasho.
(26) Marka ku xigta waddooyinka Agaasinka Guud ee Wadooyinka waaweyn oo ay kujiraan baaxadda mas'uuliyadda, maamulku wuxuu sameyn karaa dalabka isagoo helaya ra'yi ku habboon ka hor inta uusan jidka loo maro baaskiilka.
(27) Baaskiillada looma isticmaali karo meelaha loogu talagay in lagu lugeeyo. Khadadka Baaskiilka ayaa loo dhisi karaa si loogu oggolaado baaskiil wadista saacadaha qaarkood waddooyinka lugaynaya.
(28) Qawaaniinta la wareegidda ee lagu dabaqayo inta lagu gudajiro dhismaha wadooyinka baaskiillada waxaa loo fulin doonaa iyada oo la raacayo qawaaniinta Sharciga La-wareegidda ee ku taariikhaysan 4/11/1983 laguna tirin jiray 2942.
Noocyada Wadooyinka Baaskiilka, Naqshadeynta iyo Xeerarka Dhismaha
Wadooyinka baaskiilka wadaaga
QODOBKA 5 - (1) Gudaha xuduudaha degmada iyo nawaaxigeeda, xadka xawaaraha ugu badan ee gaariga waa 50 km / saac, iyo in ka badan hal haad oo isku jiho ah; Wadada ugu toosan jihada safarka ee wadada gawaarida waxaa go'aamin kara maamulku inuu yahay wado la wadaago baaskiil.
(2) Mashruucu diyaar uma ahan wadooyinka baaskiilka wadaaga. Si kastaba ha noqotee, si loo hirgaliyo, go'aanka gaadiidka iyo isuduwidda ee degmooyinka magaalooyinka, go'aanka dhismaha waddo baaskiil wadaagga ah oo ay leeyihiin guddiga taraafikada ee gobollada meelaha kale, iyo oggolaanshaha agaasimaha booliiska gobolka ayaa ah waajib.
(3) Midabaynta iyo calaamadeynta waxaa lagu sameeyaa sagxadda waddo ee baaskiil la wadaago 50 mitir oo kasta oo calaamad digniin ah waxaa la dhigayaa mitir 100 mitir oo isgoysyada jidadka ah iyo lugeeyaha lugeynaya wadada.
(4) Xitaa haddii ay ku sugan yihiin xuduudaha degmooyinka iyo aagagga la wareegi karo, jidadka baaskiil wadista waxaa laga yaabaa inaan laga dhisin waddooyinka gobolka iyo gobolka ee aagga mas'uuliyadda Agaasinka Guud ee Wadooyinka iyadoon loo eegin xaddiga xawaaraha.
QODOBKA 6 - (1) Wadooyinka Baaskiilka; Xuduudaha degmada iyo meelaha ku dhow, ee u dhow wadooyinka waaweyn ee leh xaddiga xawaaraha ugu badan ee 50km / saacaddii gaariga, heer waddo iyo iyada oo aan la kala goyn, aan loo kala saarin midigta weyn ee wadada iyo jihada safarka. Khadadka Baaskiilka ayaa sidoo kale lagu kala sooci karaa waddooyinka lugaynaya ee loo arko inay ku habboon yihiin maamulka la xiriira.
(2) Wadooyinka Baaskiilka waxaa loo naqshadeeyay loona qaabeeyey si waafaqsan Lifaaqa-Jaantuska-1. Mashruuca wadada baaskiilka waxaa ku jira 1/1 oo ah qorshe cabbir.
(3) Khadadka Baaskiilka laguma dhisi karo waddooyinka gobolka iyo gobolka ee aagga mas'uul ka ah Maareeyaha Guud ee Wadooyinka, iyadoon loo eegayn xadka xawaaraha, xitaa haddii ay ku sugan yihiin xuduudaha degmada iyo aagagga ku xiga.
Dariiqyo baaskiil oo gooni ah
QODOBKA 7 - (1) Jidadka baaskiilka ee horay loo habeeyay; Xuduudaha degmada iyo meelaha ku dhow, kooxda cagaaran, magangalyada, gogol dhaaf, farqiga tallaabada iyo masaafada jireed ee la midka ah ee wadada gawaarida ayaa lagu dabaqaa hal ama laba siyaabood. Mashruucyada wadiiqooyinka baaskiilka kala go'ay waxaa ku jira qorshe cabbir 1/200 ah. Jid go'an oo baaskiil gooni ah; ama heerka gaadhiga ama wadada laamiga ah ama ugu yaraan 10 cm ka sarreeya jidka gaariga iyo ugu yaraan 5 cm ka hooseeya waddada lugta.
(2) Haddii wadada baaskiilka loogu talagalay inay u dhawdahay waddooyinka baabuurta leh xaddiga xawaaraha ugu badan ee 50km / saacaddii gaadhiga;
a) Haddii wadada baaskiilku ay la mid tahay gaariga, rinjiyeynta waxaa lagu sameeyaa iyadoo laga tagayo masaafo dhan ugu yaraan 75 cm xariiqda midigta fog ee wadada gawaarida iyo masaafadan oo leh mitir 1 mitir iyo xariiq ballac 20 cm oo leh xagal 45 °. 1 cm udiyaar-saar sare ayaa la dhigayaa. Bedel ahaan qaabkani, gaariga iyo dariiqa baaskiilka ayaa midba midka kale uga go'doonsan yahay dhexroor ugu yaraan 110 cm ballaciisuna yahay 60 cm. (Lifaaqa-10 Jaantuska-1a iyo Jaantuska-2b)
b) Wadada Baaskiilka; masaafo ugu yaraan 60 cm u dhexeysa heerka lugeeyaha ee gaariga iyo heerka lugeeyaha, heerka heerka baaskiilka u dhexeeya gaariga iyo wadada baaskiilka. (Lifaaqa-1 Jaantuska-3a iyo Jaantuska-3b)
c) Masaafada lagu siiyay cutubkan waa inay ahaataa ugu yaraan 100 cm.
(3) Haddii wadada baaskiilka loogu talagalay inay u dhawdahay waddooyinka baabuurta leh xaddiga xawaaraha ugu badan ee 70km / saacaddii gaadhiga;
a) Haddii wadada baaskiilku la mid tahay gaariga, rinjiyeynta waxaa lagu sameeyaa iyadoo laga tagayo masaafo dhan ugu yaraan 120 cm xariiqda midigta fog ee masaafada 1 mitir 20 sentimitir ballaaran oo leh xagal 45 °. oo leh 1 cm dhejisyo sare. Bedel ahaan qaabkaan, gaariga ama dariiqa baaskiilka ayaa midba midka kale uga go'doonsan yahay dhex-dhexaadin ugu yaraan 110 cm ballac ah iyo 100 cm oo dhumuc ah, ama xarig cagaaran oo isku ballaadh ah. (Lifaaqa-10 Jaantuska-1a iyo Jaantuska-4b)
b) Wadada Baaskiilka; masaafada ugu yaraan 100 cm u dhexeysa heerka lugeynaya dadka lugeynaya ee baabuurka ama lugeeyaha lugta ee heerka wadada baaskiilka u dhexeeya wadada gaariga iyo jidka baaskiil. (Lifaaqa-1 Jaantus-5)
(4) Haddii dariiqa baaskiilka loogu talagalay in lagu xiro waddooyinka waaweyn ee leh xaddiga xawaaraha ugu badan ee 70km / saacaddii loogu talagalay gaariga;
a) Haddii wadada baaskiilku ay isku heer yihiin gaadhiga, masaafada badbaadada ugu yaraan 175 cm ayaa looga hadhayaa khadka haadka midigta fog ee wadada gawaaridaan iyo masaafadan 1 mitir u dhaxeysa iyo xariiqyada 20 cm ayaa lagu sawiray xagal 45 °. 1 cm udiyaar-saar sare ayaa la dhigayaa. Bedel ahaan qaabkaan, wadada baaskiilka ayaa midba midka kale loogu kala gooshaa iyada oo lagu wado gaari ugu yaraan 110 cm ballac ah iyo 150 cm dherer ah iyadoo la adeegsanayo dhexdhaxaad ama shaashad cagaaran oo isku mid ah. (Lifaaqa-10 Jaantuska-1a iyo Jaantuska-6b)
b) Wadada Baaskiilka; ugu yaraan 150 cm u dhexeysa gaariga iyo dadka lugeynaya heerka wadada baaskiilka. (Lifaaqa-1 Jaantuska-7)
(5) Fikrad munaasib ah ayaa laga raadin doonaa kiisaska la maleegayo in leysinka baaskiilka kala go'ay lagu dabakhi doono dariiqyada gobolka iyo gobolka ee aagagga mas'uuliyadda Agaasinka Guud ee Wadooyinka.
(6) Buundooyinka waaweyn ee leh xaddiga xawaaraha ugu badan ee ka badan 50 km / saacaddii gawaarida, kaliya taraafikada baaskiillada la soocay ayaa la naqshadeyn karaa. Xaaladdan oo kale, masaafad ugu yaraan 1 mitir oo leh badhamada dabaqa milicsiga ayaa looga hadhaa haadka laynka wadada gawaarida. Masaafadan ka dib, dhagxaan la taaban karo oo joogto ah oo waara oo dhererkiisu yahay ugu yaraan 50 cm ayaa la rakibay oo dariiqa baaskiilka ayaa la saadaalinayaa iyada oo aan laga tagin fogaannada amniga ee lagu xusay maqaalkan. (Lifaaqa-1 Jaantuska-8)
QODOBKA 8 - (1) Wadooyinka baaskiillada; Waxaa lagu dabaqaa meelaha ka xor ah taraafikada gawaarida oo lagu ilaaliyo sharciyada gaarka ah, waa haddii aysan ka hor imaanaynin sharciga ku saabsan meelaha cagaaran sida beerta qaran, jardiinada iyo goobta madadaalada.
(2) Ballaca wadooyinka socodka waa in loo adeegsadaa ugu yaraan 90 cm hal dhinac, waa haddii ay jiraan talaabooyin badbaado oo lagama maarmaan u ah maamulka ay quseyso wadooyinka baaskiilka. Qorshaha qiyaasta 1/200 waxaa lagu soo daray mashruuca socodka baaskiilka.
(3) Haddii koorsada baaskiilku ka ag dhawdahay dadka lugaynaya, majirto wax waajib ah in la rinjiyeeyo khadka geeska baaskiilka. Si kastaba ha noqotee, waa khasab in la muujiyo calaamadaha baaskiilka iyo tilmaamaha jihada. (Lifaaqa-1 Jaantuska-9)
(4) Ballaca haadka waxaa loo dhimi karaa 50 cm oo tareennada hoosaadka laba geesoodka ah oo aan ka badnayn 70 mitir oo dherer ah, kuwaas oo ka baxsan khadadka ugu waaweyn ee wadiiqooyinka baaskiilka.
(5) Haddii ay jiraan wadiiqooyin baaskiil, waxaa loo qorsheeyay in lagu xiro wadiiqooyinka baaskiilka. Saxeex, calaamad ama macluumaad waxaa bixinaya ugu yaraan mid ka mid ah calaamadaha marinka laga soo maro jidka baaskiilka ee wadada baaskiilka.
(6) Meelaha cagaaran sida beerta dadweynaha, baarkinka iyo meelaha lagu madadaasho, tiro ku filan oo ah xarumaha baarkinada baaskiillada ayaa loo qoondeeyay arrimaha la xiriira jidka baaskiilka. Saldhigyadan waxaa ku jira qalabka dayactirka ee lagama maarmaanka u ah baaskiiladaha.
(7) Waa lagama maarmaan in loo isticmaalo qalabka dhulka uumi kara ee lagu wado wadiiqooyinka baaskiilka.
(8) Tababbarka farsamooyinka baaskiil wadista waxaa lagu bixin karaa jidadka baaskiilka.
QODOBKA 9 - (1) Waddooyinka baaskiillada waa in lagu dabaqaa aagagga miyiga ee aan lahayn qorshe aagag oo ka baxsan aagga dejinta.
(2) Meelaha uu ilaaliyo sharciyada gaarka ah, dariiqa baaskiilka ayaa la samayn karaa haddii uu raaco qodobbada sharciga iyo waajibaadka la fuliyay.
(3) Mashruuc looma diyaarin wadiiqooyinka baaskiilka. Si kastaba ha noqotee, khadka tareenka waxaa lagu farsameeyaa khariiddada cadastral oo leh cabir 1/1000, haddii ay jiraan, iyo khariidadda jirta ee isku miisaan laanta maamulka ay quseyso. Ballaca dariiqa baaskiilku kama yaraan karo 70 cm.
(4) Wadooyinka baaskiilka waxaa loo dhejin karaa sidii dhul isku dhafan ama waddo xasillan si aan loogu faragalin nabadgelyada wadista.
(5) Goobaha bilowga iyo dhamaadka dhamaadka wadooyinka baaskiilka, calaamad muujineysa macluumaadka dhererka wadiiqda iyo jaangooyo ku habboon ayaa dejin doona maamulka ay quseyso. Intaa waxaa u dheer, waxaa jira calaamad tilmaamaysa mawqifka khadka safka ugu badan 1 km iyo calaamad waddo baaskiil ugu badnaan XNUMX mitir.
Xargaha baaskiilka miyiga
QODOBKA 10 - (1) Xargaha baaskiillada miyiga ah; inta u dhaxaysa degsiimooyinka halkaas oo aan lahayn qorshe aagag.
(2) Meelaha uu ilaaliyo qawaaniinta khaaska ah, baararka mootada ee miyiga waa la sameyn karaa haddii ay u hoggaansamaan qodobbada sharciga iyo waajibaadka la fuliyay.
(3) Xargaha baaskiillada miyiga waa in loo naqshadeeyaa loona dhisaa si waafaqsan Lifaaqa-Jaantuska-1 leh ugu yaraan hal haad jiho kasta.
(4) Qorshaha qiyaasta 1/1000 ayaa lagu soo daray mashruuca qodista baaskiilka miyiga. Khasab ma ahan in laynka dariiqyada baaskiilka lagu sameeyo geesaha bannaanka, iyo inta u dhexeysa xargaha 3 mitir oo u dhexeeya 1 mitir dherer ahaan iyo 10 cm ballaaran, rinji cad oo joojin ah ayaa la sameeyaa. Isticmaalka walxaha dhir-dusha ah waa muhiim waana agab kaladuwan sida shub, dhagaxa lafaha iyo waxyaabo la mid ah ayaa loo isticmaali karaa haddii ay ku siiso meel badbaado ama badbaado la mid ah.
(5) Xargaha bushkuleetiga miyigu uma dhowaan karaan in ka badan 150 cm wadada gaariga. Xaaladaha la saadaalin karo in guurka baaskiillada miyuusigga ah laga raaco waddooyinka gobolka iyo gobolka ee ku yaal aagga mas'uuliyadda guud ee Wadooyinka waaweyn, kana tagaya masaafo dhan 150 cm, waa khasab in la helo ra'yi habboon. (Lifaaqa-1 Jaantuska 10-aad)
(6) Xirmooyinka baaskiilka ee miyiga, calaamadaha iyo calaamadaha lagu cayimay Xeerkan ayaa la isticmaalayaa.
(7) Saxeexdu waa mid khasab ah meesha ay xirmooyinka baaskiillada miyigu ay ku xiraan waddooyinka kale. Dhulka wadooyinkan, calaamadaha digniinta waxaa la dhigayaa 30 mitir marka la soo diga.
(8) Bilowga iyo dhammaadka baararka baaskiilka ee miyiga ayaa lagu muujiyey dhulka. Ku dhawaad ​​bilowga suunka baaskiilka miyiga, saxan muujinaya dhererka suunka iyo qiyaasta ku habboon ayaa la dhigayaa. Haddii guutada baaskiilka miyi ay ka dheer tahay 5 kiiloomitir, Taarikada macluumaadka ee tilmaamaya masaafada iyo booska xargaha suunka waxaa la siin doonaa 1 km kasta.
Jidadka waaweyn ee baaskiilka
QODOBKA 11 - (1) Wadooyinka waaweyn ee baaskiil; gaadiid, isboorti iyo dalxiis dhaqameed, sida suurtagalnimada isticmaalka degdegga ah ee baaskiilka ayaa la qorsheeyay iyada oo la raacayo dariiqa ay go’aamisay Wasaaradda. Jidadka waaweyn ee baaskiil; Isgoysyada lugeynaya, wadada weyn, isgoysyada iyo isgoysyada heerku waa inay ahaadaan kuwo isdaba joog ah iyadoon la carqaladeyn.
(2) 1/200 miisaanka qorshaha ayaa lagu soo daray mashruuca wadooyinka baaskiilka. Wadooyinka baaskiilka waxaa loogu talagalay ugu yaraan labo haad jiho kasta. Xariiqda wadada baaskiilka ee 20 cm balaaran oo isdaba joog ah ayaa lagu calaamadeeyay dhinacyada wadada weyn ee baaskiilka. Jid-goys ayaa lagu rakibay wadada ugu yaraan 50 cm sare si looga hortago marin u helida wadada, taasoo ka dhigeysa masaafo dhan 120 cm masaafo kadib khadka khadka baaskiilka ee labada dhinac. Inta u dhaxaysa isla xariijimaha jihada isla, dheehista waxaa lagu sameeyaa xariiqyo midab leh oo midab cad leh oo dhererkiisu yahay 3 mitir iyo dherer ah 1 mitir oo masaafo ah 10 mitir. Inta u dhaxaysa jihooyinka kaladuwan, farqiga 5 cm ayaa hadhsan iyo 10 cm balaaran oo laba jibaaran oo cad oo isugeyn ah ayaa la isticmaalayaa. (Lifaaqa-1 Jaantuska-11)
(3) Jidadka waaweyn ee baaskiilka, meelaha bilowga iyo dhammaadka wadada waxaa lagu muujiyaa dhulka calaamadaha macluumaadkana waxaa la dhigayaa. Waa lama huraan in wadooyinka waaweyn ee baaskiillada loo isticmaalo aan ka aheyn baaskiiladaha; Xaaladaha khasabka ah, ambalaaska, dabka, badbaadada iyo gawaarida gendarmerie iyo gawaarida dayactirka wadooyinka ayaa isticmaali kara jidka weyn ee baaskiilka. Gawaarida iyo taraafikada dadka lugaynaya oo ka baxsan kuwan lama oggola.
(4) Macluumaadka dhijitaalka ah iyo nidaamyada digniinta ee muujinaya macluumaadka sida wadada iyo cimilada, masaafada degsiimooyinka hareereysan waxaa lagu bixin karaa jidadka baaskiilka masaafad sare ee ugu yaraan 3 mitir u jirta heerka wadada iyo kala goysyada aan ka badneyn 5 kiiloomitir.
(5) Wadooyinka waaweyn ee baaskiilku si toos ah ugama xiri karaan wadooyin kale, isgoysyada isgoysyada waxaa bixiya buundooyin ama marino hoosaad go aanka qorshaha aagaga wareega. Haddii kale, wadada weyn ee baaskiilka waa la joojiyaa.
(6) Maaddada dhulka ka samaysan ee loo yaqaan 'Asphalt dhulka' waxaa loo isticmaalaa jidadka waaweyn ee baaskiilka.
Buundooyinka baaskiilka iyo tunelada
QODOBKA 12 - (1) Buundooyinka baaskiilka ama isgoysyada buundooyinka iyo tunelada baaskiillada; Si looga gudbo caqabad dabiici ah ama dabiici ah ama in la bixiyo isku xirka iyo sii wadida wadooyinka baaskiilka, oo ay ku jiraan isgoysyada, qorshaha horumarinta waxaa loo qaabeeyey isticmaalka baaskiilleyda iyo dadka lugeeya ama wada baaskiil wadayaasha. Qorshaha qiyaasta 1/100 waxaa lagu daray buundooyinka baaskiilka iyo mashruucyada tunelada.
(2) Buundooyinka baaskiilka iyo dariiqyada baaskiilka, masaafada ugu yaraan 50 cm ayaa looga tegi doonaa dhinac kasta, marka laga reebo ballaca dariiqa baaskiilka. Masaafada looma baahna dariiqyada baaskiillada ee ku dhegan dariiqa lugta hore ee buundooyinka baaskiillada iyo tunelada baaskiillada.
(3) Dhererka ugu yar ee ilaalin kara buundooyinka baaskiillada iyo gobbooyinka waa inay ahaadaan 120 cm oo meesha bannaan ee waardiyaashu waa inay ahaadaan 15 cm. (Lifaaqa-1 Jaantuska-12 iyo Jaantuska-13)
(4) Buundooyinka hal dariiqa ah iyo tunelada ay ku isticmaali karaan dadka baaskiilleyda adeegsanaya waxaa lagu dabaqayaa ugu yaraan 250 cm ballaaran, buundooyinka laba-gees iyo dariiqyada waxaa lagu dabaqaa ugu yaraan 4 mitir ballaaran, iyo ballac 150 cm ayaa lagu darayaa iyadoo tirada leennada ay kordhayaan. (Lifaaqa-1 Jaantuska-12 iyo Jaantuska-13)
(5) Waa lagama maarmaan in la adeegsado dariiqyada biriijyada oo leh ugu badnaan 5%. Meesha loo baahan yahay jaranjarooyinka jaranjarada loo adeegsado, codsi waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo jaranjarooyinka isweydaarsiga / miiska fogaan-hoose ee ku yaal lifaaqa-3 Table-2
(6) Buundooyinka baaskiilka iyo tunelada waa in loo dhisaa si waafaqsan xeerarka sayniska iyo farshaxanka iyo sharciga sharciga.
Badbaadada taraafikada iyo xawaaraha
QODOBKA 13 - (1) Meelaha dhaadheer ee dhaadheer ee lagu dabaqi doono wadiiqooyinka baaskiilka waa in lagu fuliyaa iyadoo tixgelin la siinayo qiimaha ku jira Shaxda-3 ee lifaaqa-2. Waa lama huraan in jaranjarooyinka dhererkiisu uusan ka badneyn 5%. Sababo ay ka mid yihiin Jid-goosashada dhul-isugeedka iyo joornaalada joodariga, Jidkan waxaa loo qeexi karaa sida lagu qeexay Jadwalka 3 ee lifaaqa-2. Xaaladaha jaranjarooyinka dhererkiisu ka badan 5%, macluumaadka waxaa la siiyaa saxanka.
(2) Loogu talagalay miiqyada baaskiilka ee miyiga iyo jidadka baaskiilka, saadaalinta iyo dalabka waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo aragtida muuqata. Muuqaalka ugu yar ee taagan (S);
V = Xawaaraha ugu badan ee la saadaaliyay baaskiil (km / saac)
f = isku-filnaansho ee is-miidaaminta (0,25)
g = Dhererka Longitudinal waxaa laga xisaabiyaa qaaciddada (oo lagu qoray mitir / mitir iyo isugeynta isugeynta goosgooska isugeynta iyo isugeynta iyo kala goynta saraha).
(3) Jidka leexashada ee jidadka baaskiillada ee lagu dhisayo heerka wadada gawaarida waa inay ahaato mid raacaysa jihada biyo mareenka roobka ee lagu muujiyey TS 7249 iyo isgoyska wadada gaariga. U leexashada leexinta wadada toosan ee baaskiilka lagu sameeyo meesha sare ee laga soo qaado wadada gaariga waxaa lagu dabaqaa sidaas oo ay tahay 9826% dhinaca wadada gaariga sida ku qeexan TS 2. (Lifaaqa-1 Jaantuska-14)
(4) Ugu badnaan 5% isbadal marin ah ayaa lagu oggol yahay xirmooyinka baaskiillada miinooyinka iyo jidadka waaweyn ee baaskiilka jihada loo baahan yahay. Xeerarka baaskiilka ee miyiga iyo jidadka waaweyn ee baaskiillada, uguyaraan hirarka toosan (R) waa;
R = V2 / [127X (d / 100 + f)]
d = qaddarka goosashada (boqolkiiba inta jajab ee isugeynta wareejinta)
laga soo qaatay qaaciddada.
(5) Marka laga reebo wadooyinka, xaddidaadaha xawaaraha kala duwan waxaa go'aamin kara maamulka ay khusayso taas oo kuxiran nooca iyo meesha ay marayaan dariiqa baaskiil.
(6) Sida ku xusan qodobbada Xeerkan, isku mid ama noocyo kala duwan oo dariiqyada baaskiilka lagu dhisi doono heerka gaadhiga iyo heerar kale ayaa midba midka kale kuxiran iyada oo la adeegsanayo tallaabooyin ku habboon.
(7) Caqabadaha ku-meelgaarka ah waa in la dhigaa meela ay maamulka ay khusayso ay go'aansadaan in ay halis geliyaan nabadgelyada dadka lugaynaya ee maraya waddooyinka baaskiilka. Ujeedada daadgureynta biyaha iyo wixii la mid ah, muusikooyinka aan ku soo gelin gaariga curyaanka ee qeybaha godka ayaa la isticmaalayaa.
(8) Shuruucda Wadada Wadada Wadada No. 2918 iyo sharciga laxiriira waxaa lagu dabaqi doonaa arrimaha laxiriira isticmaalka baaskiilka iyo ganaaxyada.
Calaamado Wadooyinka Baaskiilka
QODOBKA 14 - (1) Dariiqa baaskiilka ee heerka wadadu waa inuu ahaadaa xariiq cad iyadoo la raacayo TS 10839; isgoysyada, garaashka iyo soo-galitaanka jardiinada waxaa loo kala saaray khad burburay. Wadada baaskiil waddo ee udhaxeysa xariiqda la jeexjeexay ee marinka waxaa lagu rinjiyeeyay midab buluug ah oo aan xiran doonin. (Lifaaqa-1 Jaantus-15)
(2) Calaamadaha digniinta waxaa la dhigayaa irdaha isgoyska ee wadiiqooyinka baaskiilka.
(3) Calaamadda qasabka ee baaskiilka khasabka ah ”iyo calaamada Bisiklet ma geli karaan” iyo “joogsiga iyo dhigashada waa ka mamnuuc” calaamadaha waxaa lagu dhejiyay lugeeyaha lugta si baabuurta kale aysan u soo gelin ama u dhigin wadada baaskiilka. (Lifaaqa-3 Jadwal-3)
(4) Qabanqaabooyinka la xiriira nalalka taraafikada, tas-hiilaadka iyo fursadaha doorbidista ee lagu siiyo baaskiilleyda, jidadka dhammaadka leh, waddooyinka hal-ku-socda, aagagga lugaynaya iyo xaalado gaar ah oo la mid ah ayaa lagu muujiyey astaamaha taraafikada khaaska ah.
(5) Nidaamyada taraafikada taraafikada, digniinta iyo calaamadaha jihooyinka waa in lagu dhejiyaa sagxadda iyo / ama dhinacyada haadka baaskiil-ka heer halkaas oo dhererka cad ee u dhexeeya sagxadda baaskiilka iyo geeska hoose ee saxanka baaskiilku uusan ka yarayn 220 cm. Calaamadaha lagu muujinayo dariiqyada baaskiilka waxaa la dhigayaa dhowr meelood oo lagama maarmaan ah si aysan halis ugu gelin baaskiil wadista.
(6) Haddii loo baahdo kaabayaal lagama maarmaanka u ah baaskiilleyda si ay u bixiyaan baaskiil aan kala go 'lahayn xawaare cayiman, nidaamka mowjadda cagaaran ayaa la sameeyay iyadoo la sameynayo qaban qaabno calaamad ah.
(7) Bilowga iyo dhammaadka dariiqa wareega, bidix iyo bidix, halista iyo tilmaamaha la mamnuucay waxaa lagu muujiyey taargooyinka ku xusan lifaaqa-3 Shaxda-3 iyo astaamaha dhulka lagu muujiyey ee Lifaaqa-3 Shaxda-4. Calaamadahaas iyo calaamadahaas ayaa soo noqnoqonaya isgoyska ka dib wadooyinka iyo wadooyinka
(8) Degsiimooyinka ugu dhow, isbitaalada, meelaha dalxiiska, meelaha taariikhiga ah ee lagu gaari karo baaskiil, meelaha lagu qaado gaadiidka dadweynaha, meelaha baabuurta la dhigto ee ugu dhow, iyo irridda laga soo galo iyo meesha laga baxo, tilmaamaya calaamadaha waxaa la dhigayaa meelaha ku habboon.
(9) Calaamadaha digniinta lugta ee loogu talagalay jidadka baaskiilka ayaa la dhigayaa halka loo baahan yahay dhinaca lugku ka baxo.
(10) Calaamadaha iyo calaamadaha waa in la geliyaa iridaha laga soo galo wadooyinka ee muujinaya in xawaaraha baaskiilku aanu ka badnaan karin 10 km / saacaddiiba haddii wadooyinka lugaynaya ay maamusho maamulka ay khusayso. (Lifaaqa-3 Jadwal-3)
(11) Xariiq toosan oo toosan waa in lagu sameeyaa inta u dhexeysa xargaha si loo muujiyo in haadka aan laga beddeli doonin qaybaha qalooca ee haadka baaskiillada oo leh laba haad ama kabadan isla jihada.
(12) Xaaladaha lugaygu uu ubaahan yahay inuu ka gudbo wadada baaskiilka si loo gaaro isgoysyada, calaamadaha isgoysyada lugta waxaa lagu dhigaa sagxadda wadada baaskiilka taasoo muujineysa in mudnaanta ay tahay dadka lugaynaya.
(13) Midabaynta, calaamadaynta iyo saxiixidda Jaantuska-1 ee Lifaaqa-16 waxaa loo isticmaalaa wadiiqooyinka baaskiilka la wadaago.
(14) Calaamadaha lagu sameeyo si waafaqsan qodobkaani waa inay ahaadaan cabbir lagu cayimay heerarka lagu dabaqi karo ee lagu daabacay Machadka Halbeegyada Turkiga.
Isgoysyada Wadada Baaskiil
QODOBKA 15 - (1) Isgoysyada jidadka baaskiilka ee isku xiraya joogsiyada baska waxaa lagu sameeyay sida lagu muujiyey lifaaqa-1 Jaantuska-17, Jaantuska-18, Jaantuska-19. Joogsiga, calaamadaha digniinta waxaa lagu sameeyaa sagxadda wadada baaskiilka 15 mitir u jirta aagga loo haystay baska.
(2) Isgoysyada isgoysyada ee jidadka baaskiilka waxaa loo qorsheeyay si waafaqsan TS 10839 sida lagu muujiyey tirooyinka soo socda;
a) Isgoysyada isgoysyada aan la xakameyn ee wadooyinka baaskiilka Annex-1 Jaantus-20,
b) Isgoysyada iftiinka laga xukumo ee isgoysyada waddooyinka baaskiillada Annex-1 Jaantus-21,
c) Isgoysyada wadada baaskiil ee jasiiradda dhibicda ee isgoysyada Lifaaqa-1 Jaantus-22,
ç) Isgoysyada wadooyinka baaskiil ee wadooyinka iftiinka iyo kantaroolka Lifaaqa-1 Jaantuska-23 iyo Lifaaqa-1 Jaantus-24,
d) Gudbinta dariiqyada baaskiillada ee loo maro wadada Lifaaqa-Jaantus-1,
e) Jidadka tooska ah ee ka baxsan isgoyska, isgoysyada jidadka baaskiillada ee wadada iyada oo la raacayo in marin iftiin leh ama aan la xakameyn lagu bixiyay Lifaaqa 1-Jaantuska-26 iyo Lifaaqa-1;
f) Isgoysyada isgoysyada ee jidadka baaskiillada ee heerka waddo-weynaha waxaa lagu sameeyay si waafaqsan Jaangooyada-Jaantus-1.
(3) Haddii ay dhacdo in dariiqa baaskiilku ku xiran yahay marinnada loo maro marinnada marinnada shidaalka, calaamadaha digniinta waa in lagu sameeyaa dabaqa jidka baaskiillada masaafo ahaan 15 mitir bilowga wadada ku-meelgaarka.
(4) Isgoysyada isgoysyada ee wadooyinka baaskiilka waxaa sidoo kale lagu bixin karaa buundooyin ama marinno hoostooda.
(5) Nidaamka saxiixa waa in loogu rakibaa si gooni gooni ah dadka lugaynaya, baaskiiladaha iyo gawaarida iyadoo la adeegsanayo laydhka taraafikada ee la jaan qaada gawaarida iyo baaskiilleyda marinnada. Hal ama in ka badan oo ah wadooyinka baabuurta si loo hubiyo badbaadada wadayaasha baaskiillada inta lagu jiro isgoysyada calaamadaha leh iyo in laga hortago safka gawaarida habka ay u arki karaan isticmaalayaasha kale ee wadada, masaafad 3 mitir u dhexeysa khadka joogsiga gawaarida gawaarida iyo isgoysyada dadka lugeynaya. Goobaha sugitaanka ee wata baaskiil ayaa loo sameyn karaa sidii gudaha. Waa go'aan u gaarida maamulka in lugaha loo galo lugeeyayaasha baaskiillada isgoysyada leh.
(6) Calaamadaha fallaarta ee dhulka ku yaal oo muujinaya midig iyo bidix waa inay 5 mitir u jiraan isgoyska.
(7) Xaaladaha ay lagama maarmaan tahay in la adeegsado waddada baaskiilka ee gawaarida sida albaabka gaariga, meesha baabuurta la dhigto ama garaashka, calaamadaha digniinta ayaa la dhigayaa sagxada wadada. (Lifaaqa-1 Jaantus-15)
(8) Qadka nidaamka tareenka wuxuu ku gooyaa wadada wadada baaskiilka xaglaha midig waxaana calaamadda digniinta la dhigayaa 50 mitir ka hor marinnada aan saxeexneyn oo calaamad digniin ah ayaa la dhigayaa sagxadda baaskiilka. (Lifaaqa-1 Jaantuska-30 iyo Jaantuska-31)
QODOBKA 16 - (1) Adeegsiga nidaamyada tamarta dib loo cusbooneysiin karo waxay muhiim u yihiin iftiinka wadada baaskiilka.
(2) Haddii ay dhacdo in jihooyinka qorraxda lagu dhiso dariiqa baaskiilka iyadoo la raacayo go'aanka qorshaha aagaynta, marka laga reebo waddooyinka baaskiillada ee nooca lagu qeexay qodobbada 5 iyo 6 ee Xeerkan, dusha hoose ee darbiyada waa inay ugu yaraan 3 mitir ka sarraan dabaqa waddada, oo sidaha leh waa in la siiyaa dabayl, baraf iyo wixii la mid ah. Natiijada xisaabinta ayaa la go'aaminayaa iyadoo la tixgelinayo culeysyada.
(3) Waddooyinka baaskiilku waa inay u iftiimiyaan amniga habeenkii iyo wadista raaxada ugu yaraan iyadoo la raacayo qiimayaasha ku jira Shaxda-3 ee lifaaqa-5 si aysan iftiinka uga muuqan wejiga baaskiil wadista.
Gawaarida Baarkinka Baaskiil
Xeerarka dhismaha saldhigyada baarkinka
QODOBKA 17 - (1) Saldhigyada ay dadka baaskiilladahu si amaan ah uga tagi karaan baaskiilkooda, kuwaas oo nal maraya, cimilada u adkaysta, kana madaxbannaan taraafikada gawaarida iyo halka ay baaskiillada lagu dhigan karo, waxaa lagu dhisaa heer ku habboon baahida iyo shuruudaha lagu sheegay TS 11782 waxaa lagu bixiyaa saldhigyada baarkinka.
(2) Kirada Baaskiilada ama adeegyada la wadaago waxaa lagu bixin karaa saldhigyadan haddii maamulku quseeyo uu bixiyo tiro ku filan oo ah xarumaha baabuurta la dhigto.
(3) Saldhigyada gawaarida la dhigto ee baaskiilka waa in loo habeeyaa si looga hortago gelitaanka gawaarida iyo taraafikada dadka lugta ah, ee ku dhow wadooyinka baaskiilka, la gaari karo, amaan iyo xasillooni xatooyada.
(4) Saldhigyada gawaarida ee Baaskiillada waxaa lagu gartaa astaamo iyo astaamo wargelin ah oo laga arki karo meel fog.
(5) Saldhigyada gawaarida la dhigto; Saldhigyada gawaarida korantada iyo xarumaha gaadiidka dadweynaha, nidaamka tareenka, gaadiidka bada iyo gaasyada isku xirka gaadiidka ayaa si fudud loogu hayaa si loo hubiyo in hufnaanta shabakadaha gaadiidka dadweynaha ay ku yaalaan meelaha ugu badan ee la heli karo.
(6) Saldhigyada gawaarida la dhigto ee baaskiilka ayaa loo diyaarin karaa sidii loogu talagalay iyada oo la raacayo shuruudaha dhismaha ee qorshaha horumarinta.
(7) Saldhigyada gawaarida ee baaskiillada waxaa ka mid ah habka qufulka baaskiillada kaas oo u oggolaanaya baaskiiladaha inay si ammaan ah u xiraan oo loo xafidayo amar gaar ah oo loo dhisay qaab ah in baaskiiladaha si fudud loogu geli karo oo looga saari karo meelaha baarkinka.
(8) Qalabka saldhigyada gawaarida la dhigto ee baaskiilku waa inay u adkaystaan ​​saamaynta iyo xaaladaha cimilada.
(9) Saldhigyada gawaarida ee Baaskiillada waa in loo dejiyaa iyada oo la raacayo xeerarka soo socda, oo ah qaab isku xig ah, laba saf, wareeg ama semicircular, dariiq ama xagal waddada, taas oo ku xidhan goobta:
a) Meesha lagu hayo baarkinka baaskiilka kaas oo loo sameeyay dariiqyo isku saf ah, masaafada u dhaxaysa labada baaskiil waa inay ahaataa ugu yaraan 70 cm meesha baarkinku ku dheer yahay ee baaskiilku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 200 cm. (Lifaaqa-2 Jaantuska 1-)
b) Goobta la dhigto ee baaskiillada, taas oo loo sameeyay sidii khad keliya oo wadada loo xaadhay, baaskiiladaha waxaa lagu meeleeyaa xagal 45˚ ah wadada. (Lifaaqa-135 Jaantuska-85)
c) Saldhigga baarkinka ee baaskiillada, oo loo sameeyay inuu yahay mid dhammaystiran ama semicircular ah, baaskiillada ayaa lagu abaabulayaa geed ama tiir. (Lifaaqa-2 Jaantuska-3)
ç) 175 cm u ogalaansho ayaa la bixiyaa inta udhaxeysa labada saf ee isgoysyada lugeynaya iyo meesha socodka. (Lifaaqa-2 Jaantus-4)
d) Saldhigga Baaskiil ee la dhigay laba xaglood oo wadada u jira, ballaca socodka iyo meesha lagu socdo waa inay ahaadaan ugu yaraan 140 cm. (Lifaaqa-2 Jaantus-5)
e) Saldhigga baarkinka ee baaskiillada, oo lagu sameeyay hakinta, baaskiillada waa inay ku fooraraan darbiga nus qunyar ahaan. (Lifaaqa-2 Jaantuska-6)
(10) Waa go'aan u gaar ah maamulka inuu dejiyo barta korantada ee loogu talagalay baaskiiladaha korantada ee rugaha baarkinka.
(11) Marka laga reebo saldhigyada baarkinka ee baaskiillada loo qoondeeyay qorshaha soonaha, saldhigyada gawaarida la dhigto ee si sahlan loo heli karo waxaa lagu sameyn karaa qaab dhismeedka ama oggolaanshaha iyada oo laga helayo oggolaanshaha hay'adda ay khusayso ama milkiilayaasha dhismaha ee hay'adaha dowladda ama meelaha gaarka loo leeyahay ee loo arko inay ku habboon yihiin maamulka la xiriira.
(12) Dayactirka Baaskiilka, dayactirka iyo qalabka dayactirka waa in lagu bixiyaa saldhigyada baarkinka ee baaskiillada leh adeegyada kirada baaskiilka ama ay wataan in kabadan boqol baaskiil.
Dhexgalka Nidaamyada Gaadiidka
Isdhaxgalka baaskiil wadatayaasha nidaamka gaadiidka
QODOBKA 18 - (1) Si loogu isticmaalo isticmaalka baaskiiladaha ujeeddooyinka gaadiidka, hay'adaha idman waxay xaqiijin doonaan in jidadka baaskiillada loo qorsheeyay lagu daro shabakadaha gaadiidka dadweynaha (baabuurta nidaamka tareenka, basaska, wiishashka iyo wixii la mid ah).
(2) Gaadiidka dadweynaha, basaska leh aaladda gaadiidka baaskiilka waxaa loo isticmaalaa marinnada iyo nambarada ay go'aaminayaan maamullada ay quseyso, tababarada lagama maarmaanka ah waxaa la siiyaa darawalada baska macluumaadkana waa la siiyaa. Basaska leh aaladda gaadiidka baaskiilka ayaa marka hore loo adeegsadaa wadooyinka ay jaranjarada sare taraafikuna aad u culus tahay.
(3) Saldhig ama mashiin farsameysan waxaa dhisi doona maamulka ay quseyso helitaanka baaskiil wadooyinka gaadiidka tareenka.
(4) Maamulka ay khusayso waa inay u oggolaadaan marin-u-helka baaskiiladaha nidaamka gaadiidka tareenka ee magaalada iyo gawaarida maraakiibta sida doomaha iyo doomaha tirada xaddidan ee maalinlaha ah inta lagu jiro saacadaha cufnaanta rakaabku aad u sarreeyaan oo aan lahayn wax xadidan saacadaha kale. Qolka leh qalabka hagaajinta baaskiilka waxaa lagu kala saari karaa baabuurta nidaamka tareenka. Waa qasab in la kala saaro qolka baaskiilka ee baabuurta nidaamka cusub ee tareenka la keenayo. Calaamadaha hagitaanka muuqaalka ama qoraalka ah waxaa la saaraa gawaarida nidaamka tareenka halkaasoo qeybaha baaskiilku ay ku yaalliin iyo meelaha la fadhiisto. Meesha u dhow joogsiyada, waxaa ku yaal boosteejooyin bannaanka, bannaanka ama istaagsan oo balooga dhiganaya.
(5) Aaladaha gaadiidka baaskiilka oo wata shahaadooyin qaran ama caalami, iyadoo la tixgalinayo tirada iyo culeyska baaskiillada ee gaadiidka dadweynaha, waxaa loo isticmaalay mas'uuliyadda maamulka ay quseyso.
Qodobbada kala duwan iyo kuwa ugu dambeysa
Xeerka oo la tirtiray
QODOBKA 19 - (1) Xeerarkii Nakhshadda iyo Dhismaha Wadooyinka Baaskiilka, Goobaha Baaskiiladaha iyo Goobaha Baaskiilada Waddooyinka Magaalooyinka oo lagu daabacay Jariidada Gazette ee ku taariikhaysan 3/11/2015 laguna tiriyay 29521 ayaa la tirtiray.
QODOBKA 20 - (1) Xeerarkan wuxuu dhaqan gelayaa taariikhda daabacaddiisa.
QODOBKA 21 - (1) Qodobbada Xeerkan waxaa fulin doona Wasiirka Deegaanka iyo Magaalaynta.
Ku lifaaqan Riix halkan
Xeerarka kor u qaadista Waxtarka Tamarta ee Gaadiidka Cusboonaysiinta
Xakameynta Wadada Baaskiil